Soo dejisan Bitdefender Antivirus Plus 24.0.14.80 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudBitdefender Antivirus Plus
Bogga rasmiga ah: Bitdefender Antivirus Plus
Bitdefender Antivirus Plus – software si joogto ah u ilaaliyo kombuyutarkaaga oo aad ka saarto jebinta amniga suurtogalka ah. Antivirus waxay si firfircoon uula socotaa nidaamka nidaamka iyo ogaanshaha codsiyada laga shakiyo, xogta qarsoon ee macluumaadka shakhsiyeed, isbeddel aan la ogeyn oo ku saabsan faylasha, hanjabaadaha khariidad-la’aanta ah iyo halisaha kale ee amniga. Bitdefender Antivirus Plus waxay ka ilaalisaa kambiyuutarka ka hortagga weerarada internetka, taasina waxay ka digaysaa userka ku saabsan boggaga shaki leh ee leh daaqadaha pop-up kaas oo ku jira khatarta khatarta bogagga shabakadaha leh waxyaabo xun. Software wuxuu siiyaa macaamilo qarsoodi ah oo ammaan ah iyo bangi internetka ah oo ay uga mahadcelinayaan shabakad gooni ah Bitdefender Antivirus Plus waxaa ku jira maamulaha sirta si aad si ammaan ah u keydiso lambarka sirta oo si toos ah u buuxi foomamka internetka, iyo qaab-dhismeedka VPN-ku dhisay si aad u codsato taraafikada internetka. Xaaladda xaaladda Bitdefender Antivirus Plus waxay muujinaysaa xaaladda amniga iyo dhibaatooyinka u baahan dareenkaaga iyo sidoo kale waxaa jira baro leh qalab nabadgelyo oo loo beddeli karo kuwa la doonayo oo dabadeedna xajin.
Ka-hortagga fayraska faafa
Maamulaha VPN iyo password
Soo dejisan Bitdefender Antivirus Plus
Faallo ku saabsan Bitdefender Antivirus Plus
Bitdefender Antivirus Plus Xirfadaha la xiriira